Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » abantu » UMlawuli omtsha we-Explore Minnesota Tourism ogama lakhe
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Irhuluneli yaseMinnesota uTim Walz ubhengeze namhlanje ukuba uLauren Bennett McGinty uya kusebenza njengoMlawuli omtsha we-Explore Minnesota.
Urhuluneli uWalz umisela uLauren Bennett McGinty njengoMlawuli we-Explore Minnesota Tourism.
ULauren unamava kwintengiso, unxibelelwano, imisebenzi, imali, ububele, imfundo, kunye nokukhuthaza kwi-Minnesota-based nonprofits.
Usuku lokuqala lukaLauren e-Explore Minnesota Tourism ngoNovemba 15, 2021.
Irhuluneli yaseMinnesota uTim Walz kunye noLieutenant Governor Peggy Flanagan namhlanje babhengeze ukuqeshwa kukaLauren Bennett McGinty njengoMlawuli Jonga uKhenketho eMinnesota, ukususela ngoNovemba 15.
"IMinnesota iphakathi kweendawo eziphambili zabahambi abavela kwihlabathi liphela abafuna ukujonga ubuhle bethu bendalo kunye noluntu oludlamkileyo," utshilo uRhuluneli uWalz. “Ndiyazingca ngokuchonga uLauren njengomdlali Phonononga Minnesota Tourism Director, apho aza kuzisa ubuchule bakhe kwintengiso ukubandakanya abahlali kunye nokutsala iindwendwe ezintsha kunye neetalente kwilizwe lethu. "
“IMinnesota likhaya lobuhle, ukuveliswa kwezinto ezintsha, kunye namathuba okuxabisa izixeko zethu ezidlamkileyo kunye nemithombo yendalo emangalisayo,” utshilo uLieutenant Governor Flanagan. “Siyavuya xa uLauren ekhokela Jonga uKhenketho eMinnesota kwaye uncede ukuqinisekisa ukuba abantu abavela kuzo zonke iimvelaphi kunye neendlela zokuphila baziva bevuya kwaye bamkelekile ukuba bahlole imeko yethu ekhuthazayo. "
“Siyavuya ukwamkela uLauren kubunkokeli bukarhulumente. Uzakuba yinkokeli ebalaseleyo ye-Explore Minnesota,” utshilo uMkomishinala weSebe lezeNgqesho noPhuhliso loQoqosho (DEED) uSteve Grove. "Sijonge ukusebenzisana naye kunye neqela elikhulu e-Explore Minnesota ukukhawulezisa ukuchacha kwezoqoqosho kumzi mveliso wokhenketho waseMinnesota."
“Ndiwongekile ngokuthatha le ndima ibalulekileyo njengoko ishishini lethu lezokhenketho liqhubeka nokuphuma kulo bhubhani. Njengoko sijongene nemiceli mngeni kwindlela yethu eya kwinto entsha yesiqhelo, kufuneka sifumane iindlela zokuyila zokubandakanya abahambi bangaphakathi kunye nabangaphakathi, utshilo uLauren Bennett McGinty. "Ndizimisele ukumamela iimfuno zamaqabane ezokhenketho kulo lonke elaseMinnesota ukuhambisa obona bubele bubalaseleyo elizweni kwaye ndincede abahambi bafumane amava akhethekileyo akhoyo kwilizwe lethu elikhulu."